Hazo sarobidy efa voatsofa hanana endrika « madrier » lehibe ireo sarona ireo, ka ny iray 40 no tao anatiny, ary ny faharoa nahitana 41. Nalaina tao Ihorimbato fokontany, kaominina Beravina, distrikan’i Morafenobe, faritra Melaky ireto hazo ireto. Nogiazana ao amin’ny toeram-pamonjana fiara avy hatrany moa ireto kamiao ireto, izay vehivavy ao Tsiroanomandidy no voalaza fa tompony. Voararan’ny lalàna ny mitrandraka ireto karazan-kazo tratra ireto. Nanokatra fanadihadiana ny zandary hamantarana ireo miray tendro amin’izao raharaha izao. Midika io, fa mandeha izany ny afera fandripahana hazo.